အဲလ်ဆာပွန်နက် - ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောစာအုပ်များ လက်ရှိစာပေ
Encarni Arcoya | 30/04/2021 10:26 | အတော်ကြာ
စပိန်နိုင်ငံတွင်စာပေကိုနှစ်သက်သောသူအနည်းငယ်သည် Elsa Punset အကြောင်းမကြားဖူးကြပါ။ ၎င်းထုတ်ဝေသောစာအုပ်များသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းပထမဆုံးထုတ်ဝေမှုများမှကုန်သွားသည်။ အမှန်မှာ၊ မှားသည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ၊ အဲလ်ဆာပွန်နက်သည်စပိန်နှင့်ကမ္ဘာ၌ပင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သောစာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ သူဖတ်ရှုခဲ့သည့်အခြားသူများနှင့်မတူဘဲသူ၏စာအုပ်များမှာသူ (တိုက်ရိုက်ပျင်းစရာမကောင်း) သင်ကြားပေးသောကြောင့်အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ သို့သော်သင်အတွေးအခေါ်ကိုရပ်တန့်စေပြီးအဆုံးအဖြတ်ပေးသောပုံပြင်များနှင့်သင်နားလည်လျှင်သီအိုရီအရဆိုလျှင် နားမလည်ဘူး
ဒါပေမယ့် Elsa Punset ကဘယ်သူလဲ။ ဘယ်စာအုပ်တွေရေးခဲ့တာလဲ ဤနေရာတွင်သင်၌ရှိကောင်းရှိနိုင်သောသံသယများကိုရှင်းလင်းထားပါသည်။
1 Elsa Punset ကားအဘယ်သူနည်း
2 အဲလ်ဆာပွန်နက် - ထိုက်တန်သောစာအုပ်များ
2.1 အဲလ်ဆာပွန်နက်စာအုပ်များ - ဥယျာဉ်မှူးခြင်္သေ့
2.2 အားအင်၊ အခမဲ့နှင့်ခြေသလုံး - ထူးခြားသောအချိန်တွင်နေထိုင်ရန်အဆိုပြုချက်များ
2.3 Little ကတော်လှန်ရေးများ၏စာအုပ်
2.4 Elsa Punset စာအုပ်များ - စကြဝuniverseာအတွက်ကျောပိုးအိတ်
2.5 ဘဏ္asureာရေးရှာဖွေရေးအတွက် Daredevils
2.6 အဲလ်ဆာပွန်နက်စာအုပ်များ: ကောင်းသောညနေခင်းBobiblú!
Elsa Punset ကားအဘယ်သူနည်း
အဲလ်ဆာပွန်နက်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကကျွန်ုပ်တို့ကိုလန်ဒန်သို့ပို့ဆောင်သည်။ သူသည်အထူးသဖြင့် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင်အသက် ၆၀ ကျော်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်ထိုတွင်မွေးဖွားခဲ့သော်လည်းဟေတီ၊ အမေရိကန်နှင့်မက်ဒရစ်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင် Eduardo Punset သည်လူသိများသောသိပ္ပံနည်းကျကျော်ကြားသူဖြစ်ပြီးသူအမွေဆက်ခံထားကြောင်းထင်ရှားသည်။
သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အောက်စ်ဖို့ဒ်မှဒosophနိကဗေဒနှင့်ပေးစာများတွင်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်နှင့် Humanities တွင်မဟာဘွဲ့ရရှိထားပြီး၊ စာနယ်ဇင်းပညာ (မက်ဒရစ်တက္ကသိုလ်မှနောက်တစ်ခု) နှင့်မက်ဒရစ်ရှိ Camilo José Cela တက္ကသိုလ်မှအလယ်တန်းပညာရေးတွင်တတိယရှိသည်။
သူ၏စာပေလှုပ်ရှားမှုမှာ Radical Innocence စာအုပ်များ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်ပေးသူများအတွက်သံလိုက်အိမ်မြှောင်နှင့်စကြ ၀ forာအတွက်ကျောပိုးအိတ်စာအုပ်များ (ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုအသက်ရှင်ရန်လမ်းကြောင်း ၂၁) ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးအနက်နောက်ဆုံး ၂ ခုသည်အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းစကြာ ၀ forာအတွက် Una ကျောပိုးအိတ်သည်အရောင်းရဆုံးအရောင်းရဆုံးဖြစ်လာပြီးစပိန်တွင်သာမကဂျပန်အပြင်ဂျပန်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ၁၄ အုပ်ဖြင့်အုပ်ရေ ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ အီတလီ, ဂရိ, မက္ကစီကို ...
En ၂၀၁၂ သည် The Gardener Lion တွင်ကလေးများပိုမိုအာရုံစိုက်သောစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်အလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူ။ တကယ်တော့သူဟာ ၂၀၁၅ မှာ "Los Arevidos" လို့ခေါ်တဲ့သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ပုံပြင်တွေကိုစုဆောင်းပြီးကလေးတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုကူညီဖို့အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ပျော်ရွှင်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းစသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
သူ၏နောက်ဆုံးထုတ်စာအုပ်များထဲမှတစ်ခုမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သော Little of Revolutions စာအုပ်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်သောရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရင်းများတွင်လပေါင်းများစွာပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ အခုအချိန်မှာ, Strong, Free နှင့် Nomads - Extraordinary Times တွင်နေထိုင်ရန်အဆိုပြုချက်များကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
စာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည့်အပြင် Elsa Punset သည်တီဗွီအစီအစဉ်များဖြစ်သော El Hormiguero (2010), Redes (2012) သို့မဟုတ် La Mirada de Elsa ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာရုပ်သံလိုင်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
အဲလ်ဆာပွန်နက် - ထိုက်တန်သောစာအုပ်များ
ဒီမှာ Elsa Punset စာအုပ်တွေအကြောင်းပြောရတာအရမ်းငြီးငွေ့စရာကောင်းလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့မင်းတို့ကမင်းကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေးပြီးငြီးငွေ့နေလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးမှာ၊ သင်ကအရင်ကိုမေ့သွားပြီးနောက်တစ်ခုကိုသာမှတ်မိလိမ့်မယ်။
စာရေးသူမှခေါင်းစဉ်များမများသော်လည်းအချို့သည်စာဖတ်သူများ၏ထင်မြင်ယူဆချက်များကြောင့်လည်းကောင်း၊ အချို့သောသူများသည်ဘ ၀ ၏တစ်ချိန်ချိန်တွင်ဖတ်သင့်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းအခြားသူများထက်ပိုကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ဘာတွေရှိလဲဆိုတာသိချင်သလား။ ကောင်းပြီသတိပြုပါ
အဲလ်ဆာပွန်နက်စာအုပ်များ - ဥယျာဉ်မှူးခြင်္သေ့
ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ ကြီးစွာသောသင်ယူမှုကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်ကလေးများစာအုပ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စတင်သည်။ သမိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ် ခြင်္သေ့သည်ငှက်တစ်ကောင်နှင့်မည်သို့ရင်းနှီးသနည်း။ ခြင်္သေ့သည်မျောက်များနှင့်မြွေများကိုဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီးငှက်ကိုအန္တရာယ်ကင်းစေသောကြောင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကာကွယ်ပေးကြသည်။ ပြီးတော့ဒါကခြင်္သေ့ကနေကွက်တွေကိုဖယ်ပေးတယ်။
အားအင်၊ အခမဲ့နှင့်ခြေသလုံး - ထူးခြားသောအချိန်တွင်နေထိုင်ရန်အဆိုပြုချက်များ
ဤစာအုပ်သည်အဲလ်ဆာပွန်နက်မှထုတ်ဝေခဲ့သည့်နောက်ဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သူတို့၌သူတို့၏ဘဝပြောင်းလဲမှု၊ အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်ပုံ၊ အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ကြိုးစားမှုတို့ကိုသတိပြုမိသောသူတို့အားကူညီရန်ကြိုးစားသည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ယခုလူ့အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားအတွက်လူတစ် ဦး ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လမ်းညွှန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါ။
စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်ဗိုက်ဆာသောအခါသင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်သိသည်။ သူရေငတ်သောအခါတူညီသည်။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ဝမ်းနည်းတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ထိုစိတ်ခံစားမှုများကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြိမ်များစွာမသိရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမပျော်မရွှင်ဖြစ်စေသည်။
ထို့ကြောင့်၊ စာရေးသူသည်စိတ်ဖိစီးမှု၊ အဆိုးမြင်ဝါဒ၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောပတ်ဝန်းကျင်၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ဒေါသစသည့်စိတ်ခံစားမှုအမျိုးအစားများကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုသိရှိရန်ကူညီရန်ကြိုးစားသည်။
Elsa Punset စာအုပ်များ - စကြဝuniverseာအတွက်ကျောပိုးအိတ်
သင်၏အသက်တာ၌တစ်ချိန်ချိန်တွင်သင့်ကိုယ်သင်မေးနိုင်သောမေးခွန်းများစွာတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဥပမာ, ငါတို့ဘာကြောင့်မနာလိုဖြစ်တာလဲသိလား ပျော်ရွှင်ဖို့သူငယ်ချင်းတွေဘာကြောင့်လိုတာလဲ။ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ဘာလို့ငိုတာလဲ နေ့စဉ်မေးခွန်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရသည့်ကြင်နာမှုများ၊ သို့သော်အဖြေများကဘဝကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိပါ။
ဤစာအုပ်သည် Los Darevidos စုဆောင်းမှုတွင်ဒုတိယဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးယူပြီးဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာခံစားချက်တစ်ခုမှာမိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးသူငယ်များစွာသည်၎င်းတွင်မရှိခြင်း (သို့) အနိမ့်အမြင့်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်အပြစ်ရှိသည်။ သွန်း တစ်နေ့တာကိုရင်ဆိုင်ရန်သူတို့၏စိတ်ဓာတ်နှင့်ခွန်အားကိုလွှမ်းမိုးသည်: လေ့လာမှုများ၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုစသဖြင့် ဤအကြောင်းကြောင့် Elsa Punset နှင့်ဤစာအုပ်သည်မိဘများသာမကကလေးများကိုပါကလေးသူငယ်များ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်မြင့်မားစေရန်အရင်းအမြစ်များပေးရန်ဖြစ်သည်။
ဤစာအုပ်သည် Elsa Punset မှကလေးငယ်များအတွက်အာရုံစူးစိုက်သောစာအုပ်များထုတ်ဝေသောကလေးများစုဆောင်းမှုအသစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်လူတိုင်းကသူတို့ကိုBobiblúဟုခေါ်ဆိုသည့်အထိခွေးတစ်ကောင်နှင့်အသွေးအသားဖြစ်သောကလေးတစ် ဦး ကိုတွေ့ရသည်။
ငါတို့အတွက်စာအုပ်ကဘာလဲ? ကောင်းပြီ ဤကိစ္စတွင်ဖြစ်သကဲ့သို့အိပ်ရာဝင်သကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအချို့ဒါမှမဟုတ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များအတွက်ကိုင်တွယ်ရန်ကူညီပေးဖို့။
အခုသင်အနှစ်သက်ဆုံးဒါမှမဟုတ်သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကို Elsa Punset ရဲ့စာအုပ်တွေကြည့်ဖို့အလှည့်ရောက်ပြီ။ အဲဒီမှာရှိတယ်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်ရှိစာပေ » စာပေ » အတော်ကြာ » အဲလ်ဆာပွန်နက် - ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောစာအုပ်များ